Isa zita rako rekushandisa kana kero ye-e-mail.
Iwe uchagamuchira ruyano kuburikidza ne-e-mail kuti uite imwe nyaradzi.
Username kana kero ye-e-mail
Kushanya kwakazara: 2.632.018
Vatema Vanorarama Zvikuru zana asi varikuda maitiro eSouth Africa lynch? Ndiani anobatsirwa? George Floyd mune rumwe ruzivo
Donald Trump anoridza rudimbwa apo Roma ichipisa, senge Emperor Nero
Femke Halsema inoita kuratidzira pasina mvumo yepamutemo & yeboka kugadzirwa uye 1,5 m yemagariro ekudzora isingadzoreke
Zviuru zvevanhu vari muDamu Square vakabhadhara kuratidzira kana kuti pakarepo kuna George Floyd kuti hapana anoziva?
Minneapolis George Floyd Mapurisa Murder Nzira yekusafadza Hondo Yenyika?
Martin Vrijland op Vatema Vanorarama Zvikuru zana asi varikuda maitiro eSouth Africa lynch? Ndiani anobatsirwa? George Floyd mune rumwe ruzivo
Wilfred Bakker op Vatema Vanorarama Zvikuru zana asi varikuda maitiro eSouth Africa lynch? Ndiani anobatsirwa? George Floyd mune rumwe ruzivo
Future op Vatema Vanorarama Zvikuru zana asi varikuda maitiro eSouth Africa lynch? Ndiani anobatsirwa? George Floyd mune rumwe ruzivo
Chantal74 op Vatema Vanorarama Zvikuru zana asi varikuda maitiro eSouth Africa lynch? Ndiani anobatsirwa? George Floyd mune rumwe ruzivo
SalmonInClick op Zviuru zvevanhu vari muDamu Square vakabhadhara kuratidzira kana kuti pakarepo kuna George Floyd kuti hapana anoziva?